Xus loo Sameeyay Dr. Xuseen Shiikh Axmed Kadare - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Wararka AGA Xus loo Sameeyay Dr. Xuseen Shiikh Axmed Kadare
Xus loo Sameeyay Dr. Xuseen Shiikh Axmed Kadare
Munaasabad aad u ballaaran oo lagu xusayay sannad-guuradii 7-aad ee ka soo wareegtay geeridii Dr. Xuseen Sh. Axmed Hilowle (Kadare), ayna ka soo qeyb-galeen Wasiirro, Xildhibaanno, Senatorro, Maamulka G/Banaadir, Qurba-joog, Aqoonyahanno, suugaanyahanno, Qorayaal, dhallinyaro & marti sharaf aad u badan ayaa shalay oo ku beegneyd 1/2/2022, waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Xuskaas oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka hadlay Wasiir Ku- xigeenka Wasaaradda Gaashandhigga Xildhibaan Cabdifitaax Qaasin, Senator Cismaan Xaaji Dufle, Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa, Guddoomiyihii hore ee G/Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, Prof Xasan Shiikh Cali, Prof, Yaxye Shiikh Caamir iyo masuuliyiin kale, kuwaasi oo si qoto dheer uga hadlay taariikhdii, waxqabadkii, suugaantii iyo xikmadihii Dr. Kadare.
Madaxdaasi ayaa qirey in marxuumka uu ahaa dhaqan-yaqaan aad u jeclaa afka, suugaanta, taariikhda, dhaqanka iyo hal-abuurka, waxaana ay soo jeediyeen in si ballaaran loo ururiyo waxqabadkiisii, iyaga oo ballanqaaday ina ay gacan ka gaysan doonaan adeeg walba oo lagu xasuusanayo Xuseen Shiikh Axmed Kadare.
Munaasabadaasi oo uu soo qaban-qaabiyay Golaha Kasmo ayaa waxaa looga dhawaaqay xarun cilmiyeed horumarinaysa afka, taariikhda, hidaha iyo xusidda haldoorrada Soomaaliyeed, iyada oo xaruntaasi ay ugu horeyn doono Maktabad laga hirgelin doono magaalada Jowhar.
Bishii Febraayo kowdeedii, sannadkii 2015-kii ayaa Allaha u naxariistee Dr. Xuseen Shiikh Axmed Kadare waxa uu ku geeriyooday magaalda Muqdisho, waxaana lagu aasay isla magaalada Muqdisho.